Ahoana ny fisafidianana lahatsoratra amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | iPad Pro, Fampianarana sy torolàlana
Betsaka ny mpampiasa izay mitaraina izy ireo ny amin'ny mety fampiasana totozy amin'ny iPad, ary hevero ho zavatra tena ilaina tokoa izany mba hahafahana mandinika ny iPad Pro ho toy ny tena soloina solosaina finday. Saingy, zara raha hitranga izany, satria raha toa ka mazava ny zavatra iray (farafaharatsiny mandritra ny fotoana fohy) i Apple dia ny iPad dia fitaovana natao hampiasaina amin'ny rantsantanana.
Ny fampifangaroana ny rantsan-tànanao, ny Apple Pencil ary ny klavier dia ilainao mba hahazoana tombony betsaka amin'ny iPad, saingy ilaina ny fahafantaranao ireo fitaovana rehetra ampindramininy anay. Androany dia manazava ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra isika rehefa miresaka momba ny famokarana: mifantina lahatsoratra. Na amin'ny fihetsika ataon'ny rantsan-tanantsika, amin'ny Apple Pencil na amin'ny klavier, asehonay anao ny fomba anaovanao azy haingana sy hitsitsiana fotoana betsaka.
1 Miaraka amin'ny rantsantanana
2 Miaraka amin'ny Apple Pencil
3 Miaraka amin'ny fitendry
Miaraka amin'ny rantsantanana
Amin'ny mpamoaka lahatsoratra rehetra, azonao atao ny mamindra ny bokotra manodidina ny efijery amin'ny alàlan'ny fivezivezena amin'ny rantsan-tànana roa, toy ny hoe trackpad. Fomba tena tsotra hametrahana ilay curseur amin'izay tianao hanohizana ny fanoratana na hisafidianana teny iray. Raha misafidy azy dia tsy mila manendry iray monja amin'ny rantsan-tànana roa ianao raha vao eo amboniny ny cursor, raha mikasika roa rantsan-tànana roa ianao dia hisafidy ny fehezanteny iray manontolo (hatramin'ny teboka voalohany) ary raha mikasika intelo ianao amin'ny rantsan-tànana roa dia hisafidy ny fehintsoratra iray manontolo ianao.
Azonao atao koa ny misafidy teny iray amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa azy amin'ny rantsantanana iray. Na ahoana na ahoana, nisafidy ny teny araka izay tianao hatao ianao, Vantany vao eo amin'ny efijery ny sakana manga, azonao atao ny manitatra na mampihena ny safidinao amin'ny alàlan'ny fihetsika «trackpad», izany hoe amin'ny alàlan'ny fivezivezena amin'ny rantsantanana roa manerana ny efijery. Amin'ity hetsika ity dia azonao atao koa ny mihodina raha tonga amin'ny fetra ambony na ambany ianao.
Miaraka amin'ny Apple Pencil
Raha mila marimarina kokoa isika dia afaka mampiasa ny Apple Pencil. Miaraka aminy no ahafahantsika mametraka ny cursor amin'izay tiantsika, fa raha isika koa mikasika indroa isika amin'ny teny iray dia hofidintsika izany, ary vita izany dia azontsika ampiasaina ny bara fifantina mba hampitomboana na hampihenana azy.
Miaraka amin'ny fitendry
Toy ny hoe solosaina mahazatra io, azontsika atao ny mampiasa ny Smart Keyboard (amin'ny iPad Pro ihany), ary amin'ny alàlan'ny fitambarana manan-danja dia hifantina lahatsoratra isika:
Shift + cursor: mifantina lahatsoratra. Ny kursor no ho iray mamaritra ny làlan'ny fifantenana.
Shift + cmd + cursor: hofidintsika ny tsipika iray manontolo (amin'ny alàlan'ny fanindriana ankavanana), manomboka amin'ny cursor ka hatramin'ny faran'ny antontan-taratasy (cursor midina) na ny fiandohany (taranja miakatra).
Shift + alt + cursor: teny voafantina isaky ny teny (havanana na havia) na andalana iray manontolo (ambony sy ambany).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fisafidianana lahatsoratra amin'ny iPad
Mampianatra anao hivezivezy amin'ny Internet amin'ny Apple Watch izahay